Booqashada agagaaraha Entremares - Geofumadas
Mee, 2010 safarka
Safarkaygu wuu ka dhammaaday, daal badanaa, laakiin waa mid miro dhal ah. Wax ka qabashada degaannada cusub, daqiiqado wanaagsan oo sharaf leh iyo inkastoo ay u maleynayaan in guurka ay sameeyaan xisaabta iyo Ingiriisiga dadaalkooda ugu wanaagsan.
Inta badan oo cajiib ah, hotel a aan u joogay, marka laga reebo dabaasha, faras iyo faras yar haro badda navigable loogu talagalay carruurta, waxay bixisaa safar waxa mar ahaa goobta of anigaa iska leh ah. Sida caadiga ah ka mid ah imagines classic la tunnel ah, style u sameeyey reer Spain waqtiga qabsashadii, laakiin goobaha kale waa la mid ah marka deposit dahab ah dhacdaa in beta. Xaaladdan oo kale, waayo, la kala firdhiyey, waxaa la sameeyaa in furan, shiidi sanaanayaa wax in cyanide qasi jiray biyo.
Waa su'aal in badanaa la is waydiiyo oo u dhaxeeya deegaannada isaga dila geerida iyo saynisyahannada difaacaya kantaroolka yaraynta. Sidoo kale masiibooyinka qaybo ka mid ah dunida waa tusaale ah la ilaawi karin, laakiin had iyo jeer ay sabab u ah been xun la siyaasiyiinta (si loogu ogolaado ama in ay ka doodaan ama aan runtii og calaamadu maxay) ii sheeg la ii sheegay in aan ku soo koray magaalada ah in macno ahaan qaadataa in Magaca, halkaas oo qoysaska oo dhan loo qaybiyay dahab ah oo aan u maleynayo inaan waligeed ku jirin tiro ahaan.
Sawir ahaan, aag ah habka dib u soo celinta xayawaanka. Waxaa loo arki karaa sida kor ku xusan sida dabeecadda dib ugu noqoto ujeedadeedu.
Booqashada goobta ayaa ah mid wax ku ool ah, in badan oo ka mid ah maalmahaas oo dahabku gaaray heerkii rikoodhka, oo ka sarreeya 1,200. Oo dahabkani waa mid aad u qarsoodi ah, waxaannu la yaabnay ATM (ATM) oo laga furay Dubai, halkaasoo aad ku soo gasho 450 Dollar iyo mishiinka ayaa kuugu soo laaban doona dahab dahabi ah.
Laakiin waxa macno sababtoo ah iyada oo aan danaha soo saara, ma noqon warqad qoyan sida silsilado, iyo qiimaha ma aha in dhalaalka on qoorta of gabar laakiin awoodda ay u leeyihiin in ay helaan off dhulka ku, way dhalaali jirtay iyo dib-u-aasay booska sida gurmad ee dhaqaalaha.
In garaafka, Palo Alto gooyay, isku mid ka kor kor ka, laakiin ku biiray Kodak EasyShare. Horeyba nidaamka dib u soo celinta. Fikradaha ayaa la dhigay meel lagu nasto, sawirro sawir leh, baro taariikhda ama waxay u fiicantahay Amaretto wanaagsan.
Aaggu waa sawirro, kaniisadaha qadiimka ah waxay xasuusnaadaan dhaxalka ku habboon ilaalinta.
Haddii ay dadku ka faa'iideystaan ​​iskudhafka magaalooyinka Isbaanishka, shaqo xiiso leh ayaa la samayn karaa. Fiiri asalka ah sida buurta u ekaado dusha ka dib markii roob u da'ay siduu u yimid, bartamaha dooxada laba saacadood galabtii.
In garaafka hoose, dhaxalka taariikhda dhow. Farriimaha la qabtay Cadaadiska Zelayista xilliga xagjirnimada, dimoqraadiyadda ... ama waxay u muuqataa inay ugu wacan tahay inay wacdo.
Sawirka xiga saamiga ah ee ciidda, Cascade oo biyo kulul la urta ukunta qurmay baaruud ah. Sawirka midig, qaab, arag sida ay u siinayso aragti ahaaneed qoryaha alwaax. Laakiin wax layers waxaa xididaysan qaab sheet, Reliable dhulka guide guduudan iyo ilaha biyaha oo kulul in ay calaamadaha ku dhowaad sax ah deebaaji ah oo dahab ah. Haddii ay leeyihiin dhul leh sifooyinkaas, waxay ii sheegaan :).
Waa meel xiiso leh in toddobaadkii la qaato qoyska. Waxaan ku talin lahaa iyaga.
Post Previous«Previous Ku soo sawir galka khariidadaha Google
Post Next Gaadiidka 3 GPS, aragti horeNext »
4 Jawaab ah oo ku saabsan "Booqashada Mine Entremares"
Rafael Fernández Rubio (Spain) isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan helaa wax kasta oo aad u sheegto mid aad u xiiso badan, waxaan jeclaan lahaa in aan sawiro ka badalo. Waan ogaa meesha markii miinadu ay ku jirtay hawlgal buuxa.
OleTusHuevos 2.0 isagu wuxuu leeyahay:
Ma aqaan meesha macnaha guud ee muujinta loo qaatay maxaa yeelay tarjumaadda rasmiga ahi waxay noqon doontaa - sida mid yiri - muujinta Ingiriisiga "Waa kuu wanaagsan." 🙂
kharashka Hotel; habeen US $ 30, kharashka quraac: US $ 2 (waxaa ka mid ahaa in qolka), kharashka cashada: US $ 3.
Waxaan jeclaan lahaa inaan arko saraakiisha qiimaha nolosha.
Oo waxay noqon laheyd mid si shakhsiyan ah si uu u arko meel soo jiidasho leh, taas oo raqiis ah oo aan kor u qaadin waayo-aragnimo wanaagsan.
Si looga fogaado ismaandhaaf la'aanta macnaha, Waxaan loola jeedaa miinoyinkayga, ma aha Hotel Intermares.
OleTusEuevos isagu wuxuu leeyahay:
Sida aad u nooshahay !!!! Ma tahay sarkaal?